Tranga mifamahofaho – Tsy hay na resa-bola na rongony no nahavoa anfi Black Nadia - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tranga mifamahofaho – Tsy hay na resa-bola na rongony no nahavoa anfi Black Nadia
Fanazavana tsy mitovy. Nanamafy ny feo nandeha mikasika ny tsy nahatongavany tamin’ireo fampisehoana roa tokony ho nataony teto an-drenivohitra, ny alatsinain’ny Paka lasa teo, ilay mpanakanto Black Nadia.
Fingampingana no fitantarany ny nahatratrarana rongony tao anatinfny fiara nitondra azy ireo avy any Morondava. «Nisy ny fisavan’ny polisy ny entanay rehetra fa tsy nahitana na inona na inona. Nisava ny fiara indray izy avy eo ka toerana iray no tonga dia nalehany ary nahitany ireo fonosana rongony ireo», hoy i Black Nadia, izay nitondra fanazavana tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Motel Anosy, omaly.
Raha ny fanazavan’ity mpanakanto ity ihany dia nisy ny vavolombelona nahita fa olona akaiky azy ihany no nanao ny faminganana tamin’ity raharaha ity. «Tsy afaka ny hanonona anarana aho fa efa misy ny fanadihadiana atao manodidina izany», hoy ihany izy.
Mifanohitra tanteraka amin’izany ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. «Nisy olona nanam-bola tamin’io mpanakanto io tany Morondava. Rehefa niala tany izy ireo dia nampandre ny zandary ilay olona ka tao Ankazomiriotra izy ireo no voasakana omaly (izany hoe ny alatsinainy lasa teo). Nanaraka avy aoriana ilay olona tompom-bola ka rehefa nihaona tao ny roa tonta dia nahay nifanaraka ihany», hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, lehiben’ny Cirgn Antananarivo.
zavakanto, Mpanoratra admin, 11.04.2012, 10:04	FIARAHAMONINA